Wasiirka Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Gaadiidka oo qudbad uu ku metelayo qaarada Africa ka jeediyay shir caalami ah oo ka socda dalka Turkiga”Sawirro” | Radio Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta Isgaarsiinta iyo Gaadiidka oo qudbad uu ku metelayo qaarada Africa ka jeediyay shir caalami ah oo ka socda dalka Turkiga”Sawirro”
Published on May 2, 2013 by Mowliid · No Comments · 5,325 views
Wasiirka Warfaafinta Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi kuna sugan waddanka Turkiga, magaalada saddexaad ee Izmir kana qayb galaya shir caalami ah ayaa ka jeediyay khudbaddii furitaanka isagoo ku hadlay magaca Qaaradda Afrika. Wasiirka ayaa uga mahadceliyay dawladda Turkiga casuumitaanka lagu casuumay shirkan iyo fursadda qaaliga ah ee loo siiyay inuu la hadlo ka qaybgalayaasha shirka..
Wasiirka ayaa khudbadiisa kaga warbixiyay xaaladda dalka Soomaaliyeed iyo hormarka ay dawladdani ku talaabsatey ee dhanka amniga. Wasiirka ayaa sidoo kale warbixin ka bixiyay sida ay dawladda uga go’an tahay iney dib usoo celiso shirkaddii Somali Airlines isagoo codsaday inay caalamku gaar ahaan dawladda Turkiga ee aan walaalo nahay ay umadda Soomaaliyeed ka caawiso. ” Anigoo ku hadlaya magaca qaaradda Afrika, waxaa sharaf ii ah inaan halkan joogo maanta kana qaybgalo shirkan isla markaana aan idinla wadaago dib usoo celinta shirkaddii Somali Airlines iyo hay’addii duulista hawada ee dalka Soomaaliyeed” ayuu yiri wasiirku, . Shirkan ayaa ka furmay magaalada Izmir waxuuna socon doonaa muddo saddex maalmood ah..
Shirkan oo ah mid sanadkiiba mar dhaca ayna horseed ka yihiin dalka Turkiga iyo Maraykanka ayaa waxaa ka soo qaybgala dawladaha caalamka waxaana looga hadlaa xiriirka duulimaadyada adduunka iyo qaabka iska kaashiga iyo hormarinta iyadoo Soomaaliya ay tahay waddamada sida khaaska diiradda loogu saari doono.
Wasiirka waxaa shirka ku weheliya saraakiil ka tirsan hay’adda duulista hawada Soomaaliyeed ee magaceeda loosoo gaabiyo SCAMA.Wasiirka Warfaafinta Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka ayaa mudooyinkan danbe ku mashquulsan safaro dalalka dibaddiisa ah oo dadaal ugu jiro sidii wasaaraddu usoo celin lahayd adeegyadii ay bulshada u haysay.. Bishan April 22keedii ayay ahayd markii uu wasiirku ku guuleystey in dib loo furo Boostadii umadda Soomaaliyeed 23 sano kadib.